Barcelona waa magaalad oo kuyaalo gobolka Katalooniya ee wadanka isbania. Barcelona (/ ˌbɑːrsəloʊnə / BAR-sə-LOH-nə, Catalan: [bəɾsəlonə], Spanish: [baɾθelona]) waa magaalo ku taal Spain. Waa caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn ee Catalonia, iyo sidoo kale degmada labaad ee ugu badan ee Spain. Dadweynaha 1.6 milyan oo ka mid ah xuduudaha magaalada,  degaankeeda magaaladu waxay u fidisaa degmooyin badan oo deriska ah ee kuyaala gobolka Barcelona waxayna ku nool yihiin qiyaastii 4.8 milyan oo qof,   taasoo ka dhigaysa degaanka lixaad ee ugu badan magaalada Midowga Yurub ka dib markii Paris, London, Madrid, Ruhr iyo Milan.  Waa mid ka mid ah magaalooyinka waawayn ee Badda Mediterranean, oo ku yaalla xeebta u dhaxaysa afarta webiyada ee Llobregat iyo Besogo, oo galbeed xuduudaha Serra de Collserola, xajmiga ugu sarreeya ee dhererkiisu yahay 512 mitir (1,680 fiit ) sareeya.
Waxaa loo asaasay magaalo Roomaan ah, ee ku taalla bartamaha dhexe Barcelona waxay noqotay caasimadda gobolka ee Barcelona. Ka dib markii la isku daro Boqortooyada Aragon, Barcelona waxay sii ahaanteed magaalo muhiim ah oo ku taal Crown of Aragon oo ah xarunta dhaqaalaha iyo maamulka ee Crownka iyo caasimada Mabaadi'da Catalonia. Barcelona waxay leedahay hanti dhaqamo qani ah waana maanta xarun dhaqameed iyo meel dalxiis weyn ah. Gaar ahaan caan waa hawlaha dhismaha ee Antoni Gaudí iyo Lluís Domènech iyo Montaner, oo loo qoondeeyay goobaha dhaxalka ee UNESCO. Xarunta dhexe ee Midowga Mediterranean waxay ku taala Barcelona. Magaaladu waxaa loo yaqaanaa martigelinta ciyaaraha Olombiga xagaaga ee 1992 iyo sidoo kale shirarka caalamiga ah iyo bandhigyo iyo sidoo kale tartamo isboorti oo caalami ah.
Barcelona waa mid ka mid ah dalxiisaha ugu caansan adduunka, dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo saameynta ay ku leedahay ganacsiga, waxbarashada, madadaalada, warbaahinta, moodada, sayniska, iyo farshaxanka oo dhan waxay gacan ka geysanayaan xaaladda ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee adduunka ee adduunka.   Waa xarun dhaqameed iyo dhaqaale oo ku yaal koonfur galbeed Yurub, 24-aad adduunka (kahor Zürich, Frankfurt Frankfurt) iyo xarun dhaqaale. Sannadkii 2008 waxay ahayd magaaladii afaraad ee dhaqaalaha ugu xoogan xagga dhaqaalaha ee Midowga Yurub iyo 35-aad adduunka oo ay ka kooban tahay 177 bilyan oo euro. Sannadkii 2012 Barcelona waxay heysteen $ 170 bilyan oo doolar; waxaana uu hogaaminayay Spain marka loo eego xaddiga shaqaaleynta xilligaas. 
Sannadkii 2009 magaaladu waxay ku jirtay kaalinta saddexaad ee Europe iyo mid ka mid ah adduunka ugu guulaha badan sida calaamad magaalada ah.  Sannadkiiba magaaladu waxa ay noqotay magaaladii afaraad ee ugu fiican Yurub ee ganacsiga iyo ugu dhakhsaha badan horumarinta magaalo-weynta Yurub, iyadoo kobaca uu kordhay 17% sanadkiiba,  magaaladu waxay soo martay kobac xooggan oo dib-u-cusbooneysiin ah saddexdii sano ee la soo dhaafay. Laga soo bilaabo 2011 Barcelona ayaa aheyd hogaamiye sare oo Europe ah.  Barcelona waa xarun isgaadhsiin ah, oo leh dekedda Barcelona oo ah mid ka mid ah dekedaha Yurub ee ugu caansan iyo dusha sare ee dekedda Yurub,  garoon caalami ah, Garoonka Barcelona-El Prat, kaas oo ka shaqeeya in ka badan 40 milyan oo rakaab sannadkii,  shabakadda waddooyinka, iyo xarig tareen oo xawaare sare leh oo xiriir la leh Faransiiska iyo inta kale ee Yurub. Barcelona ayaa sidoo kale ku jirta xubin Ufm ugu weyn ee ay xubnaha ka mid yihiin horyaalka Carabta oo ay matalayaan xubnaha baarlamaaniga ee horyaalka Arab league iyadoo xubin ka ah Midowga Yurub
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Barcelona&oldid=190053"
Last edited on 26 Jannaayo 2019, at 15:10
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Jannaayo 2019, marka ee eheed 15:10.